▷ Khuphela i-WhatsApp 2022 yasimahla, VERSION YOKUGQIBELA-I-Androidsis | I-Androidsis
I-Android, uninzi lwenu iyayazi, yeyona nkqubo isetyenziswayo ehlabathini, nesabelo esifikelela kuma-80% kuzo zonke ii-smartphones ezisebenzayo ngoku, inkqubo yokusebenza kaGoogle (Alphabet) yinkokheli. Nantsi imfuno kunye nokuphambili khuphela i-WhatsApp ye-Android (o khuphela isiqhulo, njengokuba usbali womkhwenyana wakho esitsho), esona sicelo sithandwayo sithandwayo singenakubakho kwezona nkqubo zaziwayo ezisebenzayo kwimarike.
Ke, kwakhona sifuna ukukufundisa yonke into ekufuneka uyazi I-WhatsApp ye-Android kunye nendlela yokufumana okuninzi kuyo.
1 Isebenza njani i-WhatsApp ye-Android
2 Khuphela i-WhatsApp ye-Android simahla
3 Khuphela i-WhatsApp APK
4 Ezinye iinguqulelo zeWhatsApp onokuzikhuphela
4.1 Khuphela i-WhatsApp Plus
4.2 Khuphela i-WhatsApp GB
4.3 Khuphela i-WhatsApp aero
4.4 Khuphela i-WhatsApp ecacileyo
5 Ungayihlaziya njani i-WhatsApp ye-Android
6 Faka i-WhatsApp kwithebhulethi ye-Android
7 Uyifaka njani i-WhatsApp Beta yasimahla
8 Iimfuneko zokufaka i-WhatsApp
9 Zeziphi ii-mobiles ezingazukukwazi ukufaka iWhatsApp?
Isebenza njani i-WhatsApp ye-Android
I-WhatsApp ngumxhasi wemiyalezo kwangoko njengayo nayiphi na enye. Ukuxhamla kukaWhatsApp okanye into eyayiyinto enqabileyo ngomhla wayo, yinto yokuba ithatha ithuba ngencwadi yethu yefowuni ukuze sikwazi ukuncokola nabo bonke abafowunelwa ngendlela elula. Xa siqala incoko kunye nabafowunelwa bethu, usetyenziso lusebenzisa i-WiFi yethu okanye uqhagamshelo lwedatha yeselfowuni ukuthumela umyalezo kwiiseva zayo, emva koko, iya kuthumela umyalezo kunye nesaziso "sokutyhala" kumamkeli, umfowunelwa sikhethile. Into elungileyo kukuba le nkqubo ibucala yabucala ngokupheleleyo nangoko.
Khuphela i-WhatsApp ye-Android simahla
Asifuni kuphoswa lithuba lokukukhumbuza ukuba i-WhatsApp ngoku sisicelo simahla kwaye ngonaphakade. Isicelo asiqulathanga intengiso okanye indleko, singayisebenzisa xa sifuna nendlela esifuna ngayo. Kufuneka nje siyifumane.I-WhatsApp ye-WhatsApp ye-Android nakuwuphi na umboneleli osemthethweni, njengeGoogle Play Store, okanye qiniseka ukukhuphela i-WhatsApp ye-Android ngeSpanish ngqo kwi whatsapp iwebhusayithi. Ukufikelela kwikhonkco elidlulileyo sinokukhuphela i-WhatsApp ye-Android ngokuthe ngqo, ukuba asiziva ngathi sikhuphela usetyenziso kwiVenkile yeGoogle Play nangasiphi na isizathu.
Umthuthukisi: I-WhatsApp LLC
Khuphela i-WhatsApp APK
Abo basebenzisi abafuni ukukhuphela i-WhatsApp kwiVenkile yokudlalaKuba bafuna ukunciphisa ubukho bukaGoogle kwiifowuni zabo ze-Android, banokujika baye kwezinye iivenkile apho banokuzikhuphelela usetyenziso kwifowuni, kubandakanya nesicelo semiyalezo. Kule ndawo yokugcina ifomathi yokukhuphela yi-APK.
Ungajika kwiivenkile ezinjenge-APK Mirror, Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu kule ndawo, apho iinguqulelo ezahlukeneyo zeapps zisungulwa kodwa eyona nto intle kukuba uyikhuphele kwiwebhusayithi esemthethweni kaWhatsApp kangangoko bona kule khonkco. Enye yeenzuzo ze-APK kukuba i-beta kunye neenguqulelo zangaphambili ziyakhutshwa kungenjalo, ngaphandle kokuba ungumvavanyi we-beta, ngekhe ukwazi ukuvavanya kwifowuni.
Kukho iivenkile ezininzi Apho unokukhuphela khona i-WhatsApp ye-WhatsApp, kodwa i-APK Mirror yenye yezona zaziwa kakhulu, kunye nokuba yenye yezona venkile zithembekileyo. Xa uhlaziya usetyenziso kuya kufuneka ukhuphele i-APK entsha eye yasungulwa ngesandla kwaye ke wonwabele iindaba zayo.
Ezinye iinguqulelo zeWhatsApp onokuzikhuphela
Khuphela i-WhatsApp Plus
I-WhatsApp inebutho elibalulekileyo labasebenzisi ngasemva kwayo, uninzi lwazo olunolwazi oluphambili lophuhliso kunye neenkqubo. Yiyo le nto ebangele ukuba umsinga wotshintsho kwisicelo seWhatsApp uvele, yile nto kanye I-whatsapp kunye, ukuguqulwa kwe-WhatsApp esivumela, umzekelo, ukufihla imeko yethu yoqhagamshelo ngokusisigxina, wenze ngokwezifiso uyilo okanye ukongeze imisebenzi esweleyo.
Khuphela i-WhatsApp Plus Kulula kakhulu, kuwo nawaphi na amaphepha ewebhu apho inkqubo iphuhlisiwe singazisebenzisa zonke izinto kunye neendaba.
Abasebenzisi be-Android banokuzikhuphelela le nguqulo kwifowuni yabo, ngesiqhelo besebenzisa i-APK. Xa uhlaziya, kuya kufuneka ufake ngesandla ingxelo entsha, kuba le nguqulo ayihlaziywa ngoDlalo lukaGoogle, njengoko kusenzeka kuhlobo oluqhelekileyo lwesicelo.
Khuphela i-WhatsApp GB
Ikwabizwa ngokuba yi-GBWhatsApp, yenye yeendlela zesicelo somyalezo. Inguqulelo eguqulweyo evumela abasebenzisi ukuba batshintshe imisebenzi ethile kunye nokubonakala kwesicelo kwifowuni. Nangona olu hlobo lwaziwa ngokukodwa ukunceda ukuphucula ukusebenza yesicelo ngendlela ecacileyo, ukuze usetyenziswe ngcono.
Yinguqulelo ekwabonelela ngeendlela ezininzi zabucala, eyenye into exabisekileyo abasebenzisi kwaye ngamanye amaxesha bayiphose kuhlobo oluqhelekileyo lwesicelo. Iya kuvumela ukuguqulwa komdibaniso, kunye neenketho ezithile zokwenza ngokwezifiso ezifumanekayo kubasebenzisi.
Le nguqulo yesicelo u nga khuphela kwesi sixhobo, apho sinakho ukufikelela kwiinguqulelo ezintsha ezisungulwa, apho imisebenzi emitsha kunye nokuphuculwa okungafaniyo kufakwe kuyo. Kwakhona, ikhutshwe ngefomathi ye-APK kwaye kuya kufuneka sikhuphele ngesandla iinguqulelo ezintsha, kuba ayihlaziywa ngeGoogle Play.
Khuphela i-WhatsApp aero
Enye imowudi ye-WhatsApp, esinokuyikhuphela kwifowuni yethu ye-Android. Le nguqulo ibonakala ngokukodwa kutshintsho olwenziwa bubuhle, kuba itshintsha kakhulu uyilo lwesicelo semiyalezo, isenza ukuba sikhangeleke njengesicelo esahluke ngokupheleleyo. Yeyona nto intsha intsha okanye isibonelelo esinikwa yile nguqulo iguquliweyo.
Njengakwezinye iinguqulelo zesicelo esiguquliweyo, abasebenzisi banothotho lwemisebenzi abanokuthi benze ngayo isicelo. Ungaliguqula ujongano, ukongeza ekubeni une ukhetho oluninzi lwabucala, ukuvumela usetyenziso ukuba luguqulwe ngcono kumsebenzisi ngamnye xa ulisebenzisa.
I-APK yale nguqulo eguqulweyo yesicelo ingalandwa kule khonkco. Xa uhlaziya kufuneka khuphela ngesandla i-APK nganye entsha Oko kusungulwa kwi-WhatsApp aero ukuze ukwazi ukonwabela iindaba ezibandakanyiweyo kuyo.
Khuphela i-WhatsApp ecacileyo
Ukugqibela kweemods zesicelo kuboniswa njengenketho izinzile, icocekile, ikhuselekile kwaye kulula ukuyisebenzisa. Kukho iindlela ezimbalwa zobumfihlo kuyo, ezivumela ukuseta amanqanaba abucala kumaqela okanye kwiingxoxo ezizezinye ezinazo kwi-app ngokwayo. Oku kuvumela ukusetyenziswa okwenzelwe wena kunye nokukhuseleka kwesicelo ngawo onke amaxesha.
Banikezela ngemisebenzi efana ube nakho ukuthumela imiyalezo nakweyiphi inomboloNokuba awunayo kwi-ajenda yakho, bhala oonobumba abaninzi kwimo yakho okanye usondeze kwiifoto zeprofayile zabafowunelwa bakho. Yimisebenzi esingenakuyifumana kuhlobo oluqhelekileyo lwesicelo, ke bayinika ukusetyenziswa ngakumbi, ukuyenza ibe nomdla ngakumbi.
I-WhatsApp ye-WhatsApp ebonakalayo inokukhutshelwa kweli khonkco. Njengazo zonke iinguqulelo zesicelo esiguquliweyo, Kuya kufuneka ukhuphele i-APK entsha ngesandla lonke ixesha kukho uhlaziyo olutsha olukhoyo. Ayihlaziywa nguGoogle Play njengohlobo oluqhelekileyo lwesicelo.
Ungayihlaziya njani i-WhatsApp ye-Android
Ukuba sifuna ukwazi indlela yokuhlaziya i-WhatsApp, sineendlela ezimbini ezicacileyo zokubamba Inguqulelo entsha yeWhatsApp ye-Android.
Singaya kumboneleli wethu osemthethweni, kule meko yiGoogle Play Store, kwaye xa singena kuyo, iyakusixelela ukuba zeziphi izicelo ezifumanekayo zohlaziyo, ukuba sifumana uWhatsApp, kuya kufuneka sicofe ku "hlaziya" msgstr "" "ukuze isicelo sikhuphele Inguqulelo yamva nje iyafumaneka kwaye ifake ngokuzenzekelayo.
Kwelinye icala, singaya ngqo kwi whatsapp iwebhusayithiUkukhuphela i I-WhatsApp .apk Singayifaka kwifolda yethu "yokukhuphela" kwaye iya kuhlaziya usetyenziso ngokuzenzekelayo ngaphandle kokuphulukana nedatha yethu okanye iincoko.
Faka i-WhatsApp kwithebhulethi ye-Android
Kodwa asifuni kuphela ukuba ne-WhatsApp kwi-smartphone yethu ye-Android, sifuna ukuba nayo naphi na apho sihamba khona nakwesiphi na isixhobo esikuyo. Kungenxa yoko kukho ithuba lokusebenzisa I-WhatsApp kwithebhulethi ye-Android. Amathuba asinika i-Android kolu hlobo lwesiganeko maninzi, kunye neendlela zokufaka ngokunjalo. Nokuba sinecwecwe le-Android elinonxibelelwano lweSIM okanye ukuba yiWiFi kuphela, siya kuba nakho ukufaka i-WhatsApp ngokulula.
Inketho yokuqala kukuya ngqo kwi WhatsApp Web kwithebhulethi ye-Android, kodwa sifuna ukuya phambili, sifuna ukufaka usetyenziso lwethu I-WhatsApp kwithebhulethi ye-Android. Ngelishwa, into esingenako ukuba nenombolo yefowuni edityaniswe kwizixhobo ezibini ngaxeshanye, kodwa singasebenzisa elinye inombolo yefowuni, nokuba yeyokwenyani okanye yokwenyani, ukuba sibe noWhatsApp kwithebhulethi yethu ye-Android simahla.
Uyifaka njani i-WhatsApp Beta yasimahla
Inkqubo yemiyalezo edumileyo inenguqulo ye-beta ekhoyo. Enkosi ngayo, siya kuba nakho zama zonke iindaba eziza kuWhatsApp ngaphambi komnye umntu. Kwakhona, le yinto esinokuyifumana simahla. Akunzima ukuyifaka kwifowuni yakho ye-Android, kufuneka ulandele nje amanyathelo ambalwa.
Ukuze wenze njalo, kuya kufuneka ufikelele kwifayile ye- Iphepha le-WhatsApp Beta, onokufikelela kuyo kwesi sixhobo. Apha, kuya kufuneka ungene kwiakhawunti yakho kaGoogle emva koko ucofe iqhosha "Yiba ngumvavanyi". Ngale ndlela, sele uyinxalenye yale beta.
Into elandelayo kukukhuphela ifayile ye Inguqulelo yeWhatsApp kwifowuni yakho ye-Android. Xa ufaka iprofayile yeapp kwiVenkile yokuDlala, uya kubona ukuba i-WhatsApp Messenger (iBeta) iyavela kwaye apha ngezantsi iya kukuxelela ukuba sele ungumvavanyi. Into ekufuneka uyenzile kukuhlaziya usetyenziso. Ke, kwixa elizayo xa ungena uya kuba sele ungumvavanyi we-beta. Ngale ndlela, uya kuba nakho ukuvavanya zonke iindaba ezifika phambi kwakhe nabani na ongomnye.
Iimfuneko zokufaka i-WhatsApp
I-WhatsApp yenye yezona zicelo zithandwa kakhulu esizifumana kwi-Android. Nangona, ayingabo bonke abasebenzisi abanenkqubo yokusebenza yefowuni abanokuyisebenzisa. Njengoko kukho inani leemfuno ukuze uyifake. Ezinye iimfuno ezinxulumene nohlobo lwenkqubo yokusebenza.
Njengakwezinye izicelo, njengoko iinguqulelo ezintsha ze-Android zifika, inkxaso yeenguqulelo ezindala ayisasaxhaswa. Kwakhona kwenzeka nge-WhatsApp. Kwimeko yakho, ukuze ukwazi ukusebenzisa iapp, kuya kufuneka ube nefayile ye- Inguqulelo elingana okanye ephezulu kune-Android 4.0. Uninzi lwabasebenzisi banenguqulo ephezulu. Kodwa, ukuba awunayo, ngekhe ukwazi ukusebenzisa iapp.
Zeziphi ii-mobiles ezingazukukwazi ukufaka iWhatsApp?
Into enxulumene ngokusondeleyo nenqaku langaphambili luluhlu lwe Iifowuni ezingazokwazi ukufaka i-WhatsApp. Inkampani ihlala ihlaziya olu luhlu rhoqo, ukunqanda isimanga esibi kubasebenzisi. Kukho inani leefowuni ezingazukukwazi ukufaka usetyenziso lomyalezo.
INokia S40 Yenye yezi fowuni, oya kuthi ukwazi ukuyisebenzisa de kube nguDisemba 31, 2018. Ke ngoko, ukusukela nge-1 kaJanuwari, awusayi kuba nakho ukusebenzisa okanye ukufaka usetyenziso.
Kwelinye icala, ezinye iifowuni ezinenguqulo yakudala ye-Android zibandakanyiwe. Zonke ezo iimodeli ezine-Android 2.3.7 kunye neenguqulelo zangaphambili Banokusebenzisa iapp, kude kube nguFebruwari 1, 2020. Xa lo mhla ugqithile, yonke into ibonisa ukuba inkxaso izakuphela, nangona ingekaqinisekiswa ngokusesikweni okwangoku. Ke abayi kuba nakho ukuyisebenzisa kwiifowuni zabo kwakhona.
Ngaphandle kwe-Android, sineefowuni ezichaphazelekayo yile meko, ezingazukusebenzisa i-WhatsApp. Iimodeli ezinefowuni yeWindows 8.0 Iinguqulelo zangaphambili azisenako ukufikelela kwi-app yemiyalezo Kananjalo abo baneBlackBerry OS kunye neBlackBerry 10 abayisebenzisi kwakhona. Olu luhlu luyanda ngaphezulu kweenyanga, ke kuyacaca ukuba amagama amatsha aya kongezwa kulo. Ukuba ufuna ukuza kuthi ga ngoku kolu luhlu, ungayibona kwiwebhusayithi yeapp, kwesi sixhobo.